सावधान ! विनाशकारी भूकम्पले महामारी निम्त्याउन सक्छ - Enepalese.com
सावधान ! विनाशकारी भूकम्पले महामारी निम्त्याउन सक्छ
इनेप्लिज २०७२ वैशाख १५ गते ११:४६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, १५ वैशाख । विनाशकारी भूकम्पपछि जनजीवन सामान्य बन्दै गएपनि खुल्ला स्थानमा दिनरात काट्दै आएकाले स्वस्थ रहनका लागि सावधान हुनुपर्ने जरुरी छ ।
विनाशकारी भूकम्पका कारण ३५ जिल्लाका मानिसहरु त्रासले घरमा बस्न सकिरहेका छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश घर भत्किएका छन् । कैयौँ मानिसको मृत्यु भएको छ । हजारौँ पशुपन्छी मरेका छन् ।
भूकम्पबाट मरेका जीवजन्तु तथा मानिसका शव सडेर झाडापखालाले महामारीको रुप लिन सक्ने खतरा भएकाले ख्याल राख्नुपर्छ । भूकम्पको त्रासले आश्रय लिँदै खुल्लाचौर, सड्क, खोला किनार, बारीको बसाईका क्रममा जथाभावी फोहोर, दिशापिसाव गर्नाले र हात सफा नगरीकन खानेकुरा खानाले पनि मानिसहरुमा रोग लाग्न सक्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाकै दशरथ रङ्गशाला, टुँडिखेल (सैनिक मञ्च), खुल्ला मञ्च, विभिन्न नदीका किनार, विद्यालय, क्याम्पसलगायतका स्थानमा भूकम्प पीडितहरु आश्रय लिइ बसिरहेका छन् । उनीहरुले हात धुनका लागि समेत पानीको अभाव भएको बताएका छन् ।
खुल्ला मञ्चमा तीन दिनेदेखि बस्दै आउनुभएका सीतादेवी अधिकारीले भन्नुभयो, “पिउनका लागि त पानी छैन, हात धुने त कुरै छैन, शौचालय गएर सफा गर्ने पानी छैन ।”
घुम्ती शौचालयको अभाव र अस्थायी शौचालयहरु पनि भरिएका कारण जथाभावी दिशापिसाव गर्नाले वातावरण प्रदुषित भइ झाडापखाला लाग्न सक्ने खतरा शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म छ ।
इपिडिमीयोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा बाबुराम मरासिनीले भूकम्पपछि जीवजन्तु सड्ने, जथाभावी दिशापिसाबका कारणले झाडापखालाजस्ता अन्य रोगको महामारी फैलिने भएकाले सावधान रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
डा मरासिनीले रोगबाट बच्नका लागि विभिन्न पाँच उपायहरु बताउनुभएको छ ।
पहिलो: सफा पानीको प्रयोग गर्नुपर्छ । पानी सफा र उमालेर मात्र पिउने वा पानीमा पीयुश वा झोल चक्की हालेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
दोस्रो: खाद्य पदार्थ तातो र ताजा मात्रै खानुपर्छ । बासी खाना खानाले झाडापखाला लाग्न सक्छ ।
तेस्रो: हात सफा राख्ने । खानेकुरा खानुभन्दा अगाडि सावुन पानीले हात धुनुपर्छ । यदि सावुन पानीको व्यवस्था नभएमा चम्चाको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
चौथोः बसेको शिविर वा खाली स्थान वरपर सफा राख्नुपर्छ । जथाभावी फोहोर नफाल्ने । बृद्धबृद्धा, बालबालिका र सुत्केरी वा गर्भवती महिला भए अझ ध्यान दिनु पर्छ ।
पाँचौँ: खुल्ला स्थानमा दिशापिसाव गर्नु हुँदैन । त्यसले गर्दा दुगन्ध फैलिएर रोग फैलिन सक्छ ।
यी माथि उल्लेख गरिएका उपायहरु अपनाए रोगको महामारीबाट बच्न सकिने डा मरासिनीको भनाई छ ।